धनी राष्ट्रले चाहिनेभन्दा बढी कोरोना खोप थुपारे, गरिब राष्ट्रलाई मेडिकलका सामग्री पनि छैन ! | GNN Nepal GNN Nepal धनी राष्ट्रले चाहिनेभन्दा बढी कोरोना खोप थुपारे, गरिब राष्ट्रलाई मेडिकलका सामग्री पनि छैन ! | GNN Nepal
विश्वमा कोरोनाले निम्त्याएको भेदभाव
धनी राष्ट्रले चाहिनेभन्दा बढी कोरोना खोप थुपारे, गरिब राष्ट्रलाई मेडिकलका सामग्री पनि छैन !
गरीब देशहरूमा ५०० जनामध्ये मुस्किलले एक जनालाई मात्रै खोप लगाइएको छ। जबकि धनी देशहरूमा प्रत्येक चारमध्ये एक व्यक्तिमा खोप लगाईएको छ
वैशाख २० गते, २०७८ १४:३४ मा प्रकाशित
काठमाडौं । सम्पूर्ण विश्व कोरोना महामारीको साथ संघर्ष गर्दैछ। भारतमा बढ्दो संक्रमणका कारण धेरै देशहरूले आफ्नो गन्तव्य स्थानहरूमा उडान गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। तर भारत बाहेक विश्वमा धेरै देशहरु जहाँ कोरोनाले भयानक रुप लिएको छ । इरान, टर्की र दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिललगायत धेरै देशहरूमा यो संक्रमण डरलाग्दो रूप लिदैछ। जुन हाल कोरोना हटस्पट नै रहेको छ।
यसैबिच टर्कीका स्वास्थ्य मन्त्री फरेतिनका अनुसार खोप लगाउन कम्तिमा दुई महिना लाग्छ। विश्वमा खोपको अभावको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको धनी देशहरूले यसको जनसंख्या धेरैपटक खोपहरू भण्डार गरेका छन्।
डब्ल्यूएचओका अनुसार गरीब देशहरूमा ५०० जनामध्ये मुस्किलले एक जनालाई मात्रै खोप लगाइएको छ। जबकि धनी देशहरूमा प्रत्येक चारमध्ये एक व्यक्तिमा खोप लगाईएको छ। उही समयमा, खोप बाहेक गरिब र मध्यम आय भएका देशहरूमा अक्सिजन, रसायन, भेन्टिलेटर र औषधिहरूको पनि अभाव छ।
धनी देशहरू खोपहरू भण्डार गर्दछन्, त्यसैले विश्वमा खोपको अभाव
गरीब वा मध्यम आय भएका देशहरूमा कोरोनाका कारण ३० प्रतिशत मानिसहरुको मृत्यु ।
संसारका गरीब र कम आय भएका देशहरूमा गत महिनामा मात्रै ९ प्रतिशतको मृत्यु भएको थियो ।
८७ प्रतिशत खोप धनी देशहरूले खरिद गरेर राखेका छन।
कतै अक्सिजन छैन , कतै अस्पतालहरूमा आईसीयू बेडहरू भरिएका छन्
ब्राजिलः २१ करोड जनसंख्याको जम्मा ६ प्रतिशतलाई खोप लगाइएको छ । मृत्युको सन्दर्भमा विश्वमा दोस्रो स्थानमा छ।
टर्कीः त्यहाँ कोरोनाको तेस्रो लहर आएको छ । जसको कारण लकडाउन गरिएको छ । लकडाउनपछि टर्कीको आयस्तर कम हुँदै छ ।
मेक्सिको : कोरोनाका कारण मृत्यु हुने सन्दर्भमा यो देश विश्वमा तेस्रो स्थानमा छ। त्यहाँ भ्याक्सिनलाई लिएर महामारिको स्थिति सिर्जना भैरहेको छ ।
ईरानः २०० शहरहरूमा रेड अलर्ट घोषणा गरिएको छ। संक्रमण नियन्त्रण गर्ने लकडाउन लगाइएको छ ।
कोलम्बिया: साढे २८ लाख भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् । ७३ हजार भन्दा बढी जनाले आफ्नो ज्यान गुमाएका छन्।
दक्षिण अफ्रीकाः भारतबाट खोपहरू नभएको कारण खोप रोकियो। स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि खोप लिन सकेनन्।
अर्जेन्टिनाः ठूला शहरहरू आईसीयूहरू भरिएका छन्। सब भन्दा धेरै नयाँ बिरामी युवाबाट आएका छन्।
पेरूः ६१ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । घरबारविहीन मानिसहरू सडकमा बस्न बाध्य छन् ।
बंगलादेश : सात लाख भज्दा बढी मानिसहरु संक्रमित भएका छन् । ११ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ ।
काेराेना जितेर घर फर्किनेकाे सङ्ख्या ६ हजार माथी ﻿
विश्वमा कोरोना : कोरोनाको नयाँ स्ट्रेनको पाइला विश्वका ४१ देशमा
पुष २२ गते, २०७७
मन्त्रिपरिषदको निर्णय : वैशाख १७ गते ४० जिल्लामा र २७ गते ३७ जिल्लामा चुनाव गर्ने
माघ २७ गते, २०७७